I-generator engcono kakhulu ye-iTunes isipho sekhadi | Ikhadi lesipho lesikhwama samahhala | | i-itunes yamahhala
Ikhaya // Blog // Amakhadi wesipho samahhala we-iTunes
Ngomlawuli> ku Ukukhangisa - 25 May 2018
I-Legit ne-Free Tunes Gift Cards Generator
Into ecacile mayelana nokuphila yukuthi ayikho into efana nesidlo sakusihlwa samahhala. Akulona lokho kuyiqiniso? Hhayi njalo. Ngethemba, awunakwehliswa yilokho esikubhalile kuze kube manje. Kuthiwani ngokunika isipho umamukeli onenhlanhla into engajatshulelwa isikhathi eside ngemuva kokuthi ithengwe, isongwe, futhi ihanjiswe? Awuyikudinga i-PhD ukwazi ukuthi sikhuluma nge-iTunes Amakhadi wesipho. Njengamakhulu enu abafana kungenzeka bewazi kakade, ubuhle balekhadi lesipho ukuthi lungasetshenziswa ukuthenga noma iyiphi i-movie, imibukiso ye-TV, izinhlelo zokusebenza, amabhuku, imidlalo, noma umculo wokhetho lomuntu siqu. Ngakho-ke, ngabe uthola amakhadi we-itunes yamahhala kumngane wakho noma umfokazi ongahleliwe, ungaqiniseka ukuthi umamukeli onenhlanhla uyoba nokuqhuma. Umbuzo lapha, ingabe ukhokha inani eliphelele kulokho okufunayo noma okukwenzayo khulula ikhadi lesipho iTunes kusekhona?
Kungani ukhokhela, uma ungayithola mahhala?
Uma usalokhu ukhokhela inani eligcwele lamabhayisikobho, izinhlelo zokusebenza, izincwadi, njll, ku-App Store, uzibophezela ukuba ube ushukela. Siyaxolisa ukuzwakala okunzima phezu lapha, kodwa ayikho indlela engcono yokunyathelisa leli phuzu ekhanda labanye abantu. Noma kunjalo, iphuzu lapha ukuthi akudingeki uhlambe amadola aphezulu ukuze uthole mahhala amakhadi wesipho iTunes eziza nezindleko ezithile, ezingafakwa ngaphakathi kwezinto ezifunayo ezifana nama-movie, imidlalo, izinhlelo zokusebenza, njll. Ukukhohlisa lapha ukusebenzisa okuhle I-generator ikhodi yekhadi lesipho se-iTunes ukuzikhulula ekukhathazeni imali ngokukhokha intela egcwele nganoma yini ku-App Store.
Akulona lokho kulula ukuthola i-generator code ye-code yensidi yesipho!
Manje, lokhu kungase kuzwakale isiJalimane kuwe, uma usuvele uvivinyile I-generator ikhadi lesipho se-iTunes ngenhlanhla kuze kube manje. Yikholelwa noma cha, iningi lalabo abangaphandle lapha lihamba ngesikebhe esifanayo. Ukukhuluma ngokukhululekile, kunzima ukuthola ithuluzi elisebenzayo futhi elisebenzayo ekudala kanye nesikhathi samanje. Ngisho noma ngabe uthola okuthile okusebenzayo, maduzane uzothola ukuthi akuyona into engafanele njengoba kubonakala ekuqaleni. Ngeshwa, yilokho isimo sangempela sezindaba nazo Ama-generator ikhadi lesipho se-iTunes kulezi zinsuku
Ukukhuluma ngokukhululekile, sasingazi ukuthi singabanikazi. Sasiba namahloni, amahloni kanye nokukhathazeka kwethu. Ngesinye isikhathi, sicabanga ukuthi sizoba ngumuntu wokugcina emhlabeni Ama-iTunes amakhodi wamahhala. Kodwa, kwakukhona ukuphazamiseka okuthakazelisayo kule ndaba. Ngesinye isikhathi, sithole i-an generator lokho okwenzekisayo kithi ngaphandle kwe-grebow evamile elingu-grebow ehilelekile ekufundeni Ama-iTunes amakhodi wamahhala. Kwakuzwakala sengathi izinombolo zethu ze-lottery zabizwa, futhi sasiya esiteji ukuqoqa loti.
Ithuluzi langempela elisetshenziswe abanye abaningi!
Ukusika indaba emfushane ngapha, silapha ukuhlanganyela ngokusemthethweni I-generator ikhodi yekhadi lesipho se-iTunes okungasetshenziswa cishe noma ubani okhona lapho ukubeka izandla ama-free iTunes amakhadi. Ingabe lokho kuzwakale kunembile futhi kuhle kakhulu ukuba kube yiqiniso? Bamba kancane! Asihambisani nesikhathi sakho nemali yakho. Ijenerethi ebuzwayo isebenza. Yebo, liye lahlolwa kaningi Ama-iTunes amakhodi wamahhala. Iningi labangane bethu abaseduze nabamalungu omndeni asekela njalo basebenzisa ngokunenzuzo ithuluzi lethu lembula. Ngakho, siyazi ngokuqinisekile ukuthi lokhu I-generator ikhadi lesipho se-iTunes isebenza njengomlingo.
Ngakho, lokhu kusho ukuthini kuwe? Kusho nje ukuthi udinga ukuba uqaphe njengoba unakho, futhi usebenzise leli thuba elihle kakhulu ngenkathi likhona. Ngendlela, sikutshele ukuthi i-generator ngeke ikukhokhele ipeni? Yebo, kungu-100% mahhala, futhi akakhululekile kusuka kugciwane nezinye izimbungulu ongacabanga ngazo. Ngakho-ke, sinqume ukuphuma evulekile ukukutshela amantombazane kulokhu okusemthethweni futhi okuqotho I-generator ikhadi lesipho se-iTunes, ukuze nina bantu nisebenzise leli thuluzi le-iTunes lesipho lesipho samahhala.
Kungase kungasebenzi iminyaka eminingi ...
Ungenzi iphutha; asiqiniseki ukuthi lokhu kungakanani I-generator ikhodi yekhadi lesipho se-iTunes uzosebenza. Sisebenzise ama-generator esikhathini esidlule esingagcinanga emakethe isikhathi eside kakhulu. Ukukhuluma ngokukhululekile, lona usinde kakhulu kunazo zonke. Eqinisweni, sibonakala simangale ukuhlala isikhathi eside kwele thuluzi emakethe yekhadi lesipho sokuqapha. Ngakho-ke, singasho ukuthi lokhu khulula ikhadi lesipho iTunes Ithuluzi i-cut cut above the scope. Kodwa, ungalindeli isikhathi eside noma ungase uphelelwe ibhasi ngoba sikholelwa ngokuqinile ukuthi ayikho enye indlela esheshayo futhi elula yokuthola khulula ikhadi lesipho iTunes. Leli yigugu langempela.
Kulabo abangazi, khulula ikhadi lesipho iTunes uye waba ithuluzi elivamile lokuhlambalaza labantu abanomphefumulo ocolile. Kholwa noma cha, ezinye izisulu ziye zalahlekelwa amakhulu namashumi amaRandi kuma-generator amafakela futhi afanayo ama-free iTunes amakhadi amathuluzi. Uma ungumuntu ofunda ngephutha lesinye, unenhlanhla. Njengoba bethi, "Indlela engcono yokugcina ulwazi lwakho lwezezimali iphephile ukuthi ungabonakali kuqala." Ngakho, iphuzu lapha ukuthi akufanele unikeze noma iyiphi idatha yakho I-generator ikhodi yekhadi lesipho se-iTunes ocela ulwazi lwakho lomuntu siqu noma lwezezimali.
Indlela eqinisekisiwe nephephile yokuthola i-tunes ikhodi yamahhala!
Ngenhlanhla, i-generator okukhulunywe ngayo ku-post ayidingi ulwazi lwakho lomuntu siqu noma lwezezimali ukukunika ukufinyelela ekhadini lesipho samahhala. Ngakho-ke, akukho ukuphulwa kwemithetho yokuphepha ye-intanethi. Njengoba kushiwo ngaphambili, akudingeki ukhokhe noma yikuphi. Ngakho-ke, ungaphezulu kwegeyimu kusukela ngezwi kusukela lapho ungenakho okulahlekelwa khona. Lokhu kufana nokuba nazo zonke amakhadi ezithandayo. Ayikho indlela ongathola ngayo ukunqoba. Ngakho-ke, asikho ukubhuka kokuncoma lokhu I-generator ikhadi lesipho se-iTunes. Siyaqiniseka ukuthi singenza izwe elihle kuma-makumi nezinkulungwane ama-free iTunes amakhadi amathemba anentshisekelo lapho. Ngakho-ke, qhubeka futhi unike isibhamu ku- khulula ikhadi lesipho iTunes generator kuze kuphele. Ungabuya futhi usibonge noma kunini ngaphansi komgwaqo!
26 Amazwana KU " Amakhadi wesipho samahhala we-iTunes "
Samsblogs May 25, 2018 ku-7: 49 am - Phendula
Abangane babelane ngalokhu okuthunyelwe kabili, lokhu kuyisiqondiso esihle kunazo zonke engake ngifunde. Manje uzothola lelo khadi lesipho!
I-Damylooks88 May 25, 2018 ku-7: 51 am - Phendula
ithuluzi langempela !! Ngithole ikhodi yekhadi lesipho lesikhwama futhi ngiyikhulule ngempumelelo!
Danny May 31, 2018 ku-1: 57 pm - Phendula
Uthole ikhodi yami: iphe
Lukas Juni 19, 2018 ku-11: 16 pm - Phendula
Uthole ikhodi yami
i-scurge Julayi 5, 2018 ku-10: 38 am - Phendula
Amakhodi we-3, ahlengiwe ngaso leso sikhathi, uzonikeza enye emndenini wami 🙂
sunny5 Julayi 22, 2018 ku-11: 34 am - Phendula
Le ndlela ingokoqobo!
Duuuuuuude Agasti 2, 2018 ku-7: 51 am - Phendula
Simon Septemba 7, 2018 ku-5: 25 am - Phendula
Millionaire Septemba 14, 2018 ku-2: 02 pm - Phendula
Ngenza lokhu kungenakuqedwa
Millionaire Septemba 14, 2018 ku-2: 12 pm - Phendula
GC Septemba 20, 2018 ku-7: 32 am - Phendula
Ikhiqizwe futhi ihlulwe ngempumelelo nge-50 $ ikhadi lesipho: ppp
vasaaaga Septemba 27, 2018 ku-7: 49 am - Phendula
Inja yomsindisi Okthoba 4, 2018 ku-8: 01 am - Phendula
Ngiyabonga kakhulu kuwe
I-Kerbelly Okthoba 11, 2018 ku-8: 18 am - Phendula
I-Trekk13 Okthoba 25, 2018 ku-9: 47 am - Phendula
Amazingspoder Novemba 15, 2018 ku-11: 38 am - Phendula
Barry Novemba 22, 2018 ku-8: 46 am - Phendula
Uthole ama-v bucks amaningi kanje: p
toro Novemba 29, 2018 ku-11: 00 am - Phendula
i-itunes yamukele ikhodi yami yekhadi lesipho engizenzile
sucker December 13, 2018 ku-8: 57 am - Phendula
I-Sanarajan December 20, 2018 ku-8: 53 am - Phendula
777 Januwari 3, 2019 ku-12: 05 pm - Phendula
suarez Februwari 7, 2019 ku-4: 33 pm - Phendula
wow the shit ingokoqobo
Habo Februwari 21, 2019 ku-4: 49 pm - Phendula
Ngidinga i-100 $
i-colio Februwari 21, 2019 ku-6: 31 pm - Phendula
ihlisiwe i-50 $ khadi lol 😀
i-anton Februwari 28, 2019 ku-4: 54 pm - Phendula
ukuthenga ama-v bucks nayo: p
ayikho March 7, 2019 ku-2: 58 pm - Phendula
Igama (Edingekayo) imeyili (Edingekayo) Iwebhusayithi
Umlayezo wakho (Edingekayo)